Ma jiraan wax xaqiiqo ah oo aan la ogeyn oo ku saabsan darajada Amazon oo caqabad ku noqon kara guulahayga?
Haa, waan ogahay dhowr ka mid ah xaqiiqooyinka aan la garanayn ee ku saabsan liiska ku yaal Amazon oo marar badan soo jiitay guulo ganacsi oo cajiib ah iyo guuldarro dhamaystiran oo ku yimid suuqa xaafadda. Waxaan loola jeedaa xaalad caadi ah oo caadi ah markaad isticmaali karto keywords bartilmaameedka ugu muhiimsan ee ku saabsan liis gareyntaada alaabadaada oo aan si sax ah u sax ahayn. Ama, tusaale ahaan, markaad dhab ahaantii ku guul daraysato inaad hesho liiska dhammaan qalabka wax soo-saarka habka saxda ah, gaar ahaan iyada oo loo marayo goobaha ugu muhiimsan ee muhiimka ah. Waxyaabahaas oo dhan la isku daro maaha kaliya inaad ka hor istaagto inaad ku hesho darajada aad u qalantay ee ku saabsan Amazon, laakiin dhab ahaantii kharashka dhabta ah ee webka, iyo ugu dambeyntii - iibka net ka badan. Sidaas, waxaan hoosta ku socdaa inaan ku tuso caqabadaha ugu muhiimsan ee aad adigu iska ilaalisid, ama ugu yaraan si dhakhso ah u hesho wax kasta oo la isku hagaajiyay si kasta oo saameyn taban oo saameyn ah ku yeelan karto darajadaada Amazon ayaa la yareeyn doonaa.
Xaqiiqda 1: Amazon's A9 Algorithm wuxuu u eegayaa Title sida qodobka muhiimka ah
In badan oo iibiyeyaasha on Amazon waxay aaminsan yihiin in qorista ereyada isku mid ah ee labadooda beeraha keyword keyword waa MUST. Laakiin dhamaantood waa kuwo qaldan. Waa maxay sababta? Si fudud sababtoo ah Amazon gudaha algorithm waxay siisaa saxda saxda ah ee erey kasta oo muhiim ah oo laga helo mawduucaaga alaabada ama meelo kale oo ku yaala keyword key - oo leh kuwa ku qoran sanduuqa raadinta ee dukaamada. Kuwa kuwaan ogyahay SEO waxay si fiican u yaqaanaan: isticmaalka nuqulladu waa wax aan fiicnayn dhab ahaantii.
Xaqiiqada 2aad: Magaca Aaladda iyo Muuqaalka Loogu Talogalay Culeysyada
Waa calaamad aad u muuqata marka ay dadku si dhab ah culeyskooda u bixiyaan, gaar ahaan shayga,. Laakiin runta ayaa ah in tagska cinwaanka dhabta ah ay qabteen miisaan badan - dabcan, marka lagu arkay indhaha Google engine engineka. Taasina macnaheedu maaha in wax la mid ah ay tahay inay noqoto mid run ah oo ku saabsan rikoorka Amazon. Kuwa ku qaataa isla kuwa ku saabsan saadaalinta wax soo saarka ee Amazon waa khalad sidoo kale. Xaqiiqda 3: Caqabadaha dheeriga ah ee aan ku dhejin doonin jawaabo muhiim ah
Soo aruuri - Amazon A ranking rikoodhka A9 algorithm waligiis raadin wax kasta oo saxda ah
ciyaarta jumlada. Dhab ahaantii, waxay u shaqeysaa iyada oo la isku daro kelmado kali ah oo keliya si aan loo baahneyn in la tuuro liiska alaabtaada adigoo galaya erayada soo noqnoqda. Taas bedelkeeda, waad fiicnaan laheyd oo kaliya inaad ka takhalusi karto waxyaallaha oo dhan oo ku dheji ereyada kale ee muhiimka ah si nadiif ah oo cad. Sidaa oo kale, waxaad lahaan doontaa qol aad u weyn oo aad u hartay si aad u hesho ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah.
Xaqiiqda 4: Qodobka 4aad: Dareemaha, Dareemaha iyo Plurals Muuqaal
Amazon A9 ayaa xisaabta ku darsanta. Waxaan u jeedaa xaalada markaad qaadan karto ereyo asal ah oo ku darso kala duwanaansho kala duwan. Tusaale ahaan, "cunto", "cunto", "cunto", iyo wixii la mid ah. Sidaas, mid kasta oo ka mid ah noocyada kala duwan ee ereyada muhiimka ah ayaa loo tixgelin doonaa erey kale oo raadin shakhsiyeed. Sida malaha iyo malaha habab kale oo ah xayeysi - Amazon si fudud ayaa iska indhatiraya dhamaantood. Taasi waa sababta aysan u baahnayn inaad waqti aad ku qaadato waxtarkaaga ku saabsan wax-ka-qabashada - waxay si fudud u saameyn ku leeyihiin darajadaada on Amazon Source .